ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - BullyingCanada
ဤမူဝါဒသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များထံမှ စုဆောင်းခံရခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ BullyingCanadaအလှူရှင်များနှင့် အလားအလာရှိသော အလှူရှင်များ။
ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒတွင်၊BullyingCanada”၊ “ကျွန်ုပ်တို့” နှင့် “ကျွန်ုပ်တို့၏” တို့သည် ရုံးများကို ရည်ညွှန်းသည်။ BullyingCanada, Inc
အလှူရှင်များနှင့် အလားအလာရှိသော အလှူရှင်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပေးပါသည်။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒသည် အလှူရှင်တစ်ဦးမှ ကျွန်ုပ်တို့ထံ မေးခွန်းများမေးမြန်းနိုင်ပုံနှင့် ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သော ကျွန်ုပ်တို့ရှိနိုင်သည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် ဖျက်ရန် လူတစ်ဦးချင်းစီက မည်သို့တောင်းဆိုနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြထားသည်။
BullyingCanada ၎င်း၏အလှူရှင်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြားမည်သူမဆို၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ လျှို့ဝှက်ရေးကို ကာကွယ်ရန် ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်ဆံနေသူများ၊ အများသူငှာတို့၏ ယုံကြည်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ တန်ဖိုးထားကာ ဤယုံကြည်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝေထားသည့် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံပုံတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး တာဝန်ခံမှုရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အမျိုးမျိုးသော ပရောဂျက်များနှင့် လှုပ်ရှားမှုများအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မကြာခဏစုဆောင်းအသုံးပြုပါသည်။ ဤအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းရရှိသူ မည်သူမဆို ၎င်းကို ဂရုတစိုက်ကာကွယ်ပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသင့်ပြီး ဤအချက်အလက်များကို အသုံးပြုမှုတိုင်းသည် သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအလေ့အကျင့်များကို ဤအောင်မြင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
BullyingCanada ၎င်း၏ သက်ဆိုင်သူများ၏ လျှို့ဝှက်ရေးကို ကာကွယ်ရန် ကတိပြုပါသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့- သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလျှို့ဝှက်ရေးနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ကျော်ကြားသော မှတ်ပုံတင်ထားသော အလှူအတန်းများအကြား စာပို့စာရင်းများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း။
ပံ့ပိုးသူအသစ်များကိုရှာဖွေရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာလည်ပတ်နိုင်ရန်ကူညီရန်အတွက်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်မေးလ်အလှူရှင်စာရင်း၏ အပိုင်းငယ်ကို အခြားနာမည်ကျော်ကြားပြီး စိတ်တူကိုယ်တူ အလှူအတန်းများနှင့် လဲလှယ်ပေးပါသည်။ အလှူရှင်များသည် ဤစာရင်းဖလှယ်မှုတွင် ပါဝင်ရန် ငြင်းပယ်ခံရပြီးနောက်မှသာ ကျွန်ုပ်တို့ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အလှူရှင်များသည် ဤအစီအစဉ်ကို အချိန်မရွေး ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
အလှူရှင်များ၏ ဆန္ဒအလျောက် ပေးပို့ထားသော ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များကို လဲလှယ်ခွင့်ပြုရန် သဘောတူခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် အလားအလာရှိသော ထောက်ခံသူအမည်အသစ်များနှင့် အရေးကြီးသော အကျိုးအမြတ်မယူသော အလုပ်အတွက် ပံ့ပိုးမှုအသစ်များ ရရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။ စာပို့စာရင်းများကို ပြင်ပကုမ္ပဏီစာရင်းပွဲစားများမှတစ်ဆင့် အမည်ဝှက်ဖြင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီး တိုက်ရိုက်မေးလ်အယူခံဝင်မှုများကို ပေးပို့ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ စာရင်းပိုင်ရှင်များမှ သင့်လျော်သောသဘောတူညီချက်ကို ရရှိကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် ဤစာရင်းပွဲစားများ လိုအပ်ပါသည်။
အခြားသော အလှူအတန်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလှူရှင်များ၏ အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာများကိုသာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ BullyingCanada အလှူရှင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ စာပို့စာရင်းများကို ဖလှယ်ထားသည့် ပရဟိတအား လှူဒါန်းရန် သဘောတူပါသည်။ အလားတူ၊ BullyingCanada အခြားအလှူတစ်ခုသို့ အလှူရှင်တစ်ဦးမှ လှူဒါန်းရန် မဆုံးဖြတ်မချင်း ကျွန်ုပ်တို့လဲလှယ်သည့်စာရင်းပါ အမည်များကို သတိမပြုမိပါ။ BullyingCanada.
အလှူရှင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ အချက်အလက်များကို ရယူသုံးစွဲပါ။
အလှူရှင်များ၏ တည်ရှိမှု၊ အသုံးပြုမှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ခြွင်းချက်များအရ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့် ပေးရန် ညွှန်ကြားစာဖြင့် ညွှန်ကြားထားသည့် စာဖြင့် တောင်းဆိုမှု လက်ခံရရှိပြီး ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း အလှူရှင်များအား ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်စွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။ သို့:
ဖရက်ဒရစ်တန်၊ NB၊ E3B 9M1
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်သည် သီးခြားတစ်ဦးချင်းစီကို ခွဲခြားရန်၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် မည်သည့်အချက်အလက်မဆိုဖြစ်သည်။ ဤအချက်အလက်တွင် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များ သို့မဟုတ် ယုံကြည်ချက်များအပြင် တစ်ဦးချင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဆိုပါက၊ BullyingCanada စစ်တမ်းများ သို့မဟုတ် စကားဝိုင်းများမှတဆင့်။ ခြွင်းချက်- တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်များတွင် ထုတ်ဝေထားသည့် အမည်များ၊ လိပ်စာများနှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကဲ့သို့သော အများသူငှာရရှိနိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် အချို့သော အများသူငှာရရှိနိုင်သော အချက်အလက်များသည် တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်များတွင် ဖော်ပြထားသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ၎င်း၏နေအိမ်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကို စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်အချက်အလက်အဖြစ်လည်း အသုံးပြုသည့်အခါ၊ ပေးထားသည့် ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များသည် လုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်အချက်အလက်ဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအဖြစ် အကာအကွယ်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့က ယူဆပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မည်သို့စုဆောင်းမည်နည်း။
BullyingCanada တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မိမိဆန္ဒအလျောက် ပေးအပ်သည့်အခါမှသာ စုဆောင်းသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စုဆောင်းချိန်တွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်ခြင်းအတွက် သဘောတူညီချက်ကို ရယူပါမည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရည်ရွယ်ချက်အသစ်တစ်ခုအတွက် ယခင်ကစုဆောင်းထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန် ဆန္ဒရှိနိုင်သည် (ဆိုလိုသည်မှာ အချက်အလက်စုဆောင်းချိန်တွင် ဖော်ပြမထားသောရည်ရွယ်ချက်)။ ဤအခြေအနေတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဦးချင်းစီအား အီးမေးလ် သို့မဟုတ် မေးလ်ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ထိုကဲ့သို့သော အသုံးပြုမှုအသစ်မှ ဖယ်ထုတ်ရန် အခွင့်အရေးပေးပါမည်။
BullyingCanada လှူဒါန်းမှု သို့မဟုတ် ကတိပြုသည့်အခါ၊ မည်သည့်အချိန်တွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းပါ။ BullyingCanada ပစ္စည်းများ တောင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဝန်ဆောင်မှုအချို့ကို အသုံးပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်၏အခြေအနေတစ်ခုအဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ BullyingCanada၊ သတင်းအချက်အလက် ပေးဆောင်နေသည့်အတွက် အတိအလင်း သတ်မှတ်ထားသော တရားဝင်သော ရည်ရွယ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်ခြင်းအတွက် သဘောတူညီချက် လိုအပ်ပါသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကို စုစည်းထားပါတယ်။ BullyingCanada တင်းကျပ်သောယုံကြည်မှု၌သိမ်းဆည်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းရရှိထားသည့်အကြောင်းရင်း(များ)အတွက် အချက်အလက်နှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ၎င်းတို့၏ လိုအပ်မှုအပေါ်အခြေခံ၍ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အချက်အလက်များကို စုစည်းထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်ရန် လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ထုတ်ဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် မျှဝေခြင်းမပြုရန် သေချာစေရန် အကာအကွယ်များ ထားရှိထားပါသည်။ ဤအချက်အလက်၏ ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ၎င်းကို ဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အလှူရှင်မှ တောင်းဆိုထားသော သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ငွေပေးငွေယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတွင် အလှူတစ်ခုလုပ်ဆောင်ရန် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်း၊ တောင်းဆိုထားသော အချက်အလက် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ ပေးပို့ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်ရပ်များထဲမှ တစ်ခုအတွက် စာရင်းသွင်းခြင်း၊ တစ်ဦးချင်းစီအကြောင်း အသိပေးခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။ BullyingCanada အဖြစ်အပျက်များနှင့် သတင်းများ၊ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို တောင်းခံပါ၊ ထောက်ခံသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ပါ။
ဒေါ်လာတစ်ထောင် (ဒေါ်လာ ၁၀၀၀) နှင့်အထက် လှူဒါန်းရန်အတွက်၊ BullyingCanada အလှူရှင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ၎င်း၏ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အလှူရှင်များ၏ အမည်များကို ထုတ်ဝေသည်။ အလှူငွေ ဒေါ်လာတစ်ထောင် (ဒေါ်လာ ၁၀၀၀) နှင့်အထက် အလှူရှင်တစ်ဦးချင်းအား ၎င်းတို့၏ လှူဒါန်းမှုပုံစံတွင် ၎င်းတို့၏ နှစ်သက်ရာကို ဖော်ပြပါ သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ် (၈၇၇) ၃၅၂-၄၄၉၇ သို့ အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] သို့မဟုတ် 471 Smythe St၊ PO Box 27009၊ Fredericton၊ NB၊ E3B 9M1 တွင် စာတိုက်မှပေးပို့နိုင်ပါသည်။
BullyingCanada အထက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ရည်ရွယ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုများပေးရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ကူညီပေးရန် ပါ၀င်သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ဤအကူအညီမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံမှရရှိသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒတွင်ဖော်ပြထားသည့် အထွေထွေကိုယ်ရေးကိုယ်တာစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတိအလင်း စုဆောင်းထားသည့်အရာထက် ကျော်လွန်၍ ၎င်းတို့၏ အချက်အလက်များကို မျှဝေခြင်းမပြုရန် အခွင့်အလမ်းနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် တစ်ဦးချင်းစီကို ကျွန်ုပ်တို့ ပုံမှန် ပေးဆောင်ပါသည်။ အချိန်မရွေး၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ၎င်းတို့၏အချက်အလက်များကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏စာပို့စာရင်းတစ်ခုမှ ဖယ်ရှားလိုပါက၊ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပို့ရန် တောင်းဆိုပါသည်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] သို့မဟုတ် (877) 352-4497 တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ရက်ပေါင်း 30 (သုံးဆယ်) အတွင်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ပါမည်။
အကယ်၍ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတော်ရုံးမှ ပရိုမိုးရှင်းအချက်အလက်များကို လက်ခံရယူခြင်းမှ ဖယ်မပေးပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ BullyingCanada တိုးတက်မှုများ သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုများ၊ လာမည့် ရန်ပုံငွေရှာဖွေပွဲများ သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးကူညီမှု အခွင့်အလမ်းများ။
ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး
သင်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါမှာ BullyingCanada.ca ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမဟုတ်သော အချက်အလက်များကို စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ ဆိုက်ကို စီမံခန့်ခွဲရန်၊ အလှူရှင်များ၏ လှုပ်ရှားမှုကို ခြေရာခံရန်နှင့် ကျယ်ပြန့်သော လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စုစည်းအသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် IP လိပ်စာများကို စုဆောင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သိရှိနိုင်သော အချက်အလက်များနှင့် IP လိပ်စာများကို ချိတ်ဆက်မထားပါ။
ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုနှင့်/သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းမှပေးဆောင်ရန် တောင်းဆိုသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် စကားဝှက်ပရိုတိုကောများနှင့် ကုဒ်ဝှက်ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များ၏အကာအကွယ်ကိုအမြင့်ဆုံးရရှိရန်ပုံမှန်မွမ်းမံထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များသို့ လင့်ခ်များပါရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သတိထားပါ။ BullyingCanada အခြားထိုဝဘ်ဆိုဒ်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအလေ့အကျင့်များအတွက် တာဝန်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလှူရှင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ထွက်ခွာသည့်အခါတွင် သတိပြုမိရန်နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းသည့် ဝဘ်ဆိုက်တိုင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒကို ဖတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းပါသည်။
ကွတ်ကီးများသည် ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုသူများကို အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် ဝဘ်ဆိုက်၏ဆက်လက်ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှုကို လွယ်ကူသက်သာစေရန်အတွက် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှ အသုံးပြုနိုင်သော သေးငယ်သောစာသားဖိုင်များဖြစ်သည်။ BullyingCanada မ မဟုတ် ပရိုမိုးရှင်း သို့မဟုတ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကွက်ကီးများမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းပေးသည့် အချက်အလက်ကို အသုံးပြုပြီး ထိုအချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မျှဝေခြင်းမပြုပါ။ အသုံးပြုသူများ သတိထားသင့်သည်။ BullyingCanada ကြော်ငြာရှင်များ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ကွတ်ကီးအသုံးပြုမှုကို ထိန်းချုပ်၍မရပါ။
cookies များအသုံးပြုခြင်းဖြင့် စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်ကို မလိုချင်သူများအတွက်၊ browser အများစုသည် အသုံးပြုသူများအား cookies များကို ငြင်းပယ်ရန် သို့မဟုတ် လက်ခံရန် ခွင့်ပြုပါသည်။ ဤ site တွင်ရရှိနိုင်သောအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုပေးဆောင်ရန် cookies များလိုအပ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။
BullyingCanada သင့်လျော်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအမံများဖြင့် အချက်အလက်များ၏ တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် သင့်လျော်စွာအသုံးပြုမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စီးပွားဖြစ် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အဆင့်များလုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ အွန်လိုင်းငွေပေးငွေယူနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများအားလုံးသည် တစ်ဦးချင်းစီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးသော လုံခြုံသော၊ သီးသန့်နှင့် လုံခြုံသောစနစ်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအားလုံးသည် ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒ၏ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့၏တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်သည့်အခါတွင် ရရှိနိုင်သော အချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စနစ်အားလုံးကို အရည်အသွေးမြင့် firewall ဖြင့် ကာကွယ်ထားပြီး သုံးစွဲသူများအားလုံး စကားဝှက်ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း။
BullyingCanada စုဆောင်းထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်(များ)ကို ဖြည့်ဆည်းရန်နှင့် တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရန် လိုအပ်သရွေ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအလေ့အကျင့်များကို ပုံမှန်သုံးသပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုဒ် www.bullyingcanadaကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးပေါ် အလေ့အကျင့်များဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအတွက် ပုံမှန် .ca။
ဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲ၊ ဝင်ရောက်ခွင့်တောင်းတာ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို အပ်ဒိတ်လုပ်နည်း
BullyingCanada ဖိုင်များကို ပြည့်စုံ၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ တိကျစေရန်အတွက် စီးပွားရေးအရ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ပြုလုပ်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အဆက်အသွယ် အချက်အလက်ကို ရယူရန်၊ အပ်ဒိတ် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စာပို့စာရင်းမှ ဖယ်ရှားရန် တောင်းဆိုပါက သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် လျှို့ဝှက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးလိုပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရာရှိကို 471 Smythe St၊ PO Box 27009၊ Fredericton၊ NB၊ E3B သို့ စာတိုက်ဖြင့် ဆက်သွယ်ပါ။ 9M1 သို့ (877) 352-4497 သို့ခေါ်ဆိုပါ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့် သင့်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို Canada ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကော်မရှင်နာ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ www.priv.gc.ca/en/
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည် ၎င်း၏အလှူရှင်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဖောက်သည်များနှင့် အခြားသက်ဆိုင်သူများအားလုံး၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ လျှို့ဝှက်ရေးကို ကာကွယ်ရန် ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်ဆံနေသူများ၊ အများသူငှာတို့၏ ယုံကြည်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ တန်ဖိုးထားကာ ဤယုံကြည်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ကျွန်ုပ်တို့အား သင်ရွေးချယ်ထားသော အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံပုံတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
တစ်ဦးချင်းစီသည် ၎င်းတို့၏ အချက်အလက်များကို အတည်ပြုရန်၊ အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသုံးမပြုတော့သော အချက်အလက်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ၎င်းတို့၏ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။
ပုံမှန်အလှူရှင်ကတ်ကို မွမ်းမံထားသော အချက်အလက်ဖြင့် သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် အထွေထွေအလှူရှင်နှင့် ဖောက်သည်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကို အလွယ်တကူ အပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ BullyingCanada (877) 352-4497 တွင် အခမဲ့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး အလှူရှင် ဖိုင်သို့ အထွေထွေ ပြောင်းလဲရန် တောင်းဆိုခြင်း။
အလှူရှင်နှင့် ဖောက်သည် အချက်အလက် အပြောင်းအလဲများအပြင် တစ်ဦးချင်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဖိုင်များ၏ မိတ္တူများအတွက် တောင်းဆိုမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာဖြင့် ရေးသားပေးပို့ရပါမည်-
BullyingCanada Inc က
471 Smythe St၊ စာတိုက်သေတ္တာ ၂၇၀၀၉
အချို့သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဖိုင်များကို တောင်းဆိုသောအခါ၊ အခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် သက်ဆိုင်သော လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များ ရှိနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ BullyingCanada ထိုဖိုင်တွင် လင့်ခ်ချိတ်ထားသည်။ လိုက်လျောညီထွေစွာ BullyingCanada ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒများ၊ ဤဖိုင်များကို ကူးယူခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ဝေခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုင်ကို တောင်းဆိုသူ တစ်ဦးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဖြစ်ရပ်မှန်အချက်အလက်များကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အခြေအနေအရ၊ တောင်းဆိုချက်များနှင့် အပ်ဒိတ်များအားလုံးကို တောင်းဆိုချက်ကို လက်ခံရရှိပြီး ရက်ပေါင်း 30 အတွင်း ပြီးမြောက်မည်ဖြစ်သည်။
BullyingCanada အလှူရှင်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဖောက်သည်များနှင့် အခြားသက်ဆိုင်သူအားလုံးကို လေးလေးစားစား ဆက်ဆံရန် ကတိပြုပါသည်။ အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှု မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အမှားအယွင်းများနှင့် နားလည်မှုလွဲမှားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အချိန်များ ရှိလိမ့်မည်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြဿနာကို ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းဖို့က အဓိက အကျဆုံးအချက်ပါ။ BullyingCanada. သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်-
BullyingCanada Inc မှ
ဖရက်ဒရစ်တန်၊ NB E3B 9M1
သင်၏ မက်ဆေ့ချ် သို့မဟုတ် စာထဲတွင် အောက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းရန် သေချာစေပါ။
ဆက်သွယ်လိုသော လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်၊
တိုင်ကြားချက်၏ သဘောသဘာဝ၊ နှင့်
ဒီကိစ္စနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ဘယ်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးပြီလဲ။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် တိုင်ကြားချက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ တုံ့ပြန်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သော သင်၏အခွင့်အရေးများနှင့် လျှို့ဝှက်ရေးဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို Canada ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကော်မရှင်နာ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ www.priv.gc.ca/en/